China Special Hot Sale Waterproof Aluminom Street Light Cobra 100W Street Light Light Light Fixtures na-emepụta na ndị na-ebubata ngwaahịa | Kasem
Ọkụ pụrụ iche na-ere mmiri na-adịghị na Aluminom Street Lights Cobra 100W Street Light LED Light Fixtures
Okpomọkụ agba (CCT): 2700K-6500K
Ọrụ ngwọta ọkụ: ọkụ na imewe sekit, LitePro DLX okirikiri nhọrọ ukwuu, Agi32 okirikiri nhọrọ ukwuu, Project nwụnye.
Ogologo ndụ (awa): 36000
Voltaji ntinye (V): AC85-265V
Oriọna na-egbuke egbuke Flux(lm): 110-120lm/w
Okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃): -20 - 60
Aha ika: Kasem ma ọ bụ OEM
Nọmba nlereanya: COBS-30-200
Agba: Black, Dark Grey
Nkwanye ike: AC
Ihe eji arụ oriọna: Alloy alumini
Isi mmalite ọkụ LED: Epistar
Aha ngwaahịa: Led Street Lamp
Ihe: Aluminom+ Ihe mkpuchi
Ụdị No owerw Nha ọkụ Igwe ọkụ LED Waterproof PCS/CTN Nkwakọ ngwaahịa
KASEM-20w 2uw 11.7" 9.2 * 2.7 2835 SMD IP65 60pcs/ctn 39*32.5*23
KASEM-30W 3uw 16*12.1*2.3 2835 SMD IP65 60pcs/ctn 51.5*32.5*29
KASEM-100w 10uw 27*21.4"3 2835 SMD IP65 20pcs/ctn 44.5*39.5*29
KASEM-200w 200w 37.8*27.8*4 2835 SMD IP65 10pcsl 47.5*40"30
KASEM-300w 30uw 45*34*5.8 2835 SMD IP65 10pcs/ctn 47.5*40*30
Nchapụta dị elu: 300W LED ebe a na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala, SMD3030 LED ike na-azọpụta ọkụ ọkụ, Ọ dịghị flicker, na-arụ ọrụ dị elu nke 36000LM, dị ka ìhè ehihie, na-enwu n'ụzọ dị mfe, ebe a na-adọba ụgbọala na ebe ndị ọzọ buru ibu, na naanị otu onye nwere ike. mee ka ụlọ gị niile nwee ọkụ.
Oriri ike dị ala:Chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik, nhọrọ dị mkpa iji dochie oriọna ndị na-eri nri dị elu nke ọdịnala gara aga. 300W na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala nwere ike dochie 1000-1200W HID / HPS, na-enye gị ego 75% na ego eletrik, na-azọpụta ọtụtụ narị dollar.
siri ike ma sie ike:Ihe aluminom siri ike na-eme ka ọ dị ogologo oge na nkwụsị ọkụ dị mma. Igwe ọkụ na-eji usoro oghere iji mee ka ebe ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ, mee ka ikuku ikuku dịkwuo elu, chebe mgbawa oriọna, ma nye 50,000+ awa ọkụ na-adịte aka.
Akwụkwọ ikike afọ 5:Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla mgbe ị na-eji ọkụ ebe a na-adọba ụgbọala anyị, dị ka nsogbu ngwaahịa, mmebi ngwaahịa, nrụnye, wdg, biko buru ụzọ kpọtụrụ anyị. Anyị ga-aza n'ime awa 24 ma hụ afọ ojuju gị.
Isi iyi ọkụ ọkụ dị elu
Igwe ọkụ LED na-adịgide adịgide na LEDs, hụ na arụmọrụ dị elu maka ihe karịrị 50,000-hour ojiji.
Shell siri ike & IP65 enweghị mmiri
Ebe a na-adọba ụgbọala bụ ihe nrụpụta aluminom na-anwụ anwụ, enweghị mmiri kpamkpam na uzuzu, ọ dabara maka ebe mmiri na mmiri mmiri.
Chips arụmọrụ dị elu
-Mgbakọ jikọtara ọnụ nke ukwuu
- Ọzọ Stable Chip
-Echekwa ike ọzọ
Ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ ike
Ìhè ọkụ ọkụ anyị wuru na onye ọkwọ ụgbọ ala LED dị elu, na-enye opekata mpe awa 50000 nke ndụ, ọ na-arụ ọrụ ike na nchekwa ọkụ eletrik.
- Ọgwụgwọ nrụrụ elu
- Nchekwa na Stable
- Ogologo ndụ
Ahụ oriọna aluminom dị elu
-Elu mma anwụ-nkedo aluminum
-Multi-layer baking agba
-Mgbasa ọkụ siri ike
-Enwere mmetụta mkpofu ọkụ dị mma
-Aluminom ụgbọ elu
- Otu oge akpụ
-Mmiri na-egbochi mmiri na mmiri
Q1. Kedu ihe bụ MOQ gị? Enwere m ike ịtụ obere ịtụ QTY n'oge mbụ?
A: Maka ndị ahịa ọhụrụ, a na-anabata obere usoro QTY n'oge mbụ. Na nnukwu ego ị na-etinye, ọnụahịa ka mma anyị nwere ike ịnye.
A: Ọ dabere na ọnụọgụgụ. N'ozuzu, ọ na-ewe gburugburu 15days mgbe nkwụnye ego ịkwụ ụgwọ maka anyị
mechaa usoro ahụ. (Ewezuga ngwaahịa ahaziri iche)
Q3. Kedu oge ịkwụ ụgwọ?
A: Anyị niile na-ahọrọ T / T, ikpo okwu alibaba.
Q4. Afọ ole ka ị na-ekwe nkwa maka ngwaahịa gị?
A: Maka ọtụtụ ngwaahịa anyị, anyị nwere ike ịnye akwụkwọ ikike afọ 3; Maka ọkụ azụmahịa bụ akwụkwọ ikike afọ 2.
Q5. Ị nwere ike ịme ngwaahịa ODM, OEM?
A: Ee, ODM, OEM ka anabatara.
Q6. Kedu ka esi aga n'ihu maka ngwaahịa ọkụ?
A: Mbụ mee ka anyị mara ihe ị chọrọ ma ọ bụ ngwa.
Nke abuo Anyị na-ehota dị ka gị chọrọ ma ọ bụ anyị aro.
Nke atọ ahịa na-akwado samples na-edebe nkwụnye ego maka iwu iwu.
Nke anọ Anyị na-ahazi mmepụta.
Q7. Ọrụ a pụrụ ịdabere na ya mgbe ire ere:
A: Ndị ahịa nwere ike iduzi anyị ka ha gbaa nsogbu ọ bụla; Anyị ga-eweta akụkụ mapụtara zuru oke maka ọrụ ọ bụla;
Ngwọta oge awa 24 nke ịkpọ oku ma ọ bụ ịkpọtụrụ email na-adị mgbe niile.
Nke gara aga: Igwe ọkụ ihe mberede enwere ike ịgbanye maka ike mpụ mkpọmkpọ ebe n'èzí 9W 800LM E26 3000K 5000K
Osote: ada ìhè maka ubi
Igwe ọkụ ihe mberede enwere ike ịchaji maka ọkụ ọkụ...
Ikanam ọhụrụ ebuanu okirikiri ọkụ panel mgbanwe
Igwe anaghị agba nchara nchagharị ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ...